क्यानभासै ‘क्यानभासमा कोरिएका कथाहरु’,(धीरकुमारश्रेष्ठ)
प्रत्येकको जीवन एउटा क्यानभास हो । जीवनको आँगनीमा पहिलो पाइलो टेक्दा रित्तो आएको क्यानभास जीवन जतिजति अगाडि बढ्दै जान्छ उतिउति विभिन्न रङहरुले रङ्गिँदै जान्छ । रङ्गिँदारङ्गिँदै क्यानभासको रङ पहिल्याउनै कठिन पर्छ र मूर्त चित्र बनाउन लागिपरेको चित्रकार अमूर्त चित्र बनाउन पुग्छ । त्यस अमूर्त चित्र अवलोकन गर्ने अवलोकनकर्ताले चित्रकारले भन्दा फरक ढङ्गले चित्रको व्याख्या गरिदिन्छ र चित्रकार अवाक रहन्छ । उसले के भनेर चित्र बनाउन थालेको थियो र चित्र बनिदियो के ? ऊ त्यसबेला झन् छक्क पर्छ जति बेला अर्को कुनै दर्शकले उसको त्यही चित्रलाई अर्को कोणले व्याख्या गरिदिन्छ । यो क्रम चल्दै जान्छ र उसको एउटै चित्रप्रति पनि फरकफरक दृष्टिकोणहरु अभिव्यक्तिने क्रम जारी रहन्छ । अन्ततः ऊ हार खान्छ र पर्यवेक्षकीय पर्यवेक्षणप्रति नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छ । उसले स्विकार्नै पर्छ, चित्र मूर्त होइन अमूर्त बन्न गयो जसलाई प्रत्येकले आआफ्नै तरिकाले बुझ्न सक्छन् । यो स्वतन्त्रता उनीहरुसँग सुरक्षित छ । यसलाई संसारको कुनै पनि कानुनले प्रतिबन्धित गर्न सक्दैन । सबै नियमहरुभन्दा यो सर्वोच्च छ । त्यही सर्वोच्च बुझाइको अमूर्त चित्र हो जीवन । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
जीवनका क्यानभासमा अनेकौँ रङहरु पोतिन्छन् र रङहरुको संयोजन बुझ्नै नसकिने क्षणमा प्रवेश गर्छ । यसैले जीवनप्रतिको बुझाइ प्रत्येकको अलगअलग हुन्छ एउटै हुँदैन । एउटै हुँदो हो त सम्भवतः जीवनका बहुविध व्याख्या र मूल्यमान्यता कायम हुँदैनथे । सरल हुन्थ्यो जसलाई सबैले सहजै बुझ्न सक्थे र कहीँकतै द्वन्द्वको गुन्जायस रहँदैनथ्यो । जीवन बाँच्ने सर्वसम्मत एउटा सूत्र हुन्थ्यो जसलाई अथ्र्याउँदै जाँदा एउटा स्पष्ट परिभाषा सबैका सामु उपस्थित हुन्थ्यो । सबैले त्यसलाई सहजै ह्दयतः स्विकार्थे । त्यसप्रति विमति हुँदैनथ्यो केवल सम्मति हुन्थ्यो । यो एउटा आदर्श अवस्था हो जुन व्यवहारतः अव्यावहारिक छ । फलतः जीवन अमूर्त चित्रझैँ छ जसलाई अथ्र्याउनेहरु प्रशस्त थिए, छन् र रहने छन् । यही ‘छन्’ को पङ्क्तिमा उभिन आइपुगेकी छन् शर्मिला खड्का (दाहाल) ‘क्यानभासमा कोरिएका कथाहरु’ लिएर ।
विधाविचलनका सन्दर्भमा लेखिएका भए पनि यिनलाई कथा भन्न छाडिएको छैन । विधाविचलन यसकारण भनियो कि यसमा सङ्गृहीत दुई दर्जन एक कथालाई ‘कथाहरु’ भनिए पनि ‘कथासङ्ग्रह’ भनिएको छैन बरू कोष्ठकमा (कथाशृङ्खला) भनिएको छ । यसरी शृङ्खलाबद्ध कथाहरु हुँदाहुँदै पनि यसलाई उपन्यास भनिएको छैन र ‘कथा’ भन्न छाडिएको छैन । यसबाट एउटा मानक स्थापित हुन्छ कि कथाहरुको रास लगाउँदैमा उपन्यास हुँदैन । उपन्यास हुनका लागि कथाहरु भएरमात्र पुग्दैन । ती कथाहरुलाई जोड्ने कुनै सूक्ष्म तन्तु हुनुपर्छ जसबाट कथाको होइन उपन्यासको निर्माण हुन्छ । यस मान्यताको डिलमा उभिएर विचार्दा शर्मिलाका कथाशृङ्खलाहरु उपन्यास नभई कथा नै हुन् तर ती विशुद्ध कथा भने होइनन् । कारण अरु पनि छन् । एउटा कथासङ्ग्रहभित्र पाइने विभिन्न स्वाद र बान्कीका कथाहरु सङ्ग्रहभित्र पाइन्नन् । फरकफरक विषयवस्तुको आस्वादन गर्न चाहने आस्वादकका लागि एउटै विषयवस्तुका कथाशृङ्खलाहरु यसमा पाइन्छन् । तिनले ग्रहण गरेको एउटै विषयवस्तु हो प्रेम । प्रेमको तार प्रत्येक कथामा कुनै न कुनै तरिकाबाट एकअर्कासँग जोडिएकै छन् । यो प्रेम प्राप्तिको तहभन्दा पनि माथि समर्पणको तहसम्म उकालिएको छ । जसले समर्पणबाट लाभ उठाइरहेको छ उसलाई पनि थाहा छैन कि उसको प्राप्ति अरु कसैको त्यागको परिणाम हो । भलै यस किसिमको प्रेमिक बलिदानका लागि उसले आफ्नो सम्पूर्ण भविष्यलाई तिलाञ्जली दिन परेको किन नहोस् । भन्नका लागि त यस किसिमको तिलाञ्जलीलाई बन्धनबाट मुक्तिको प्रसङ्गमा अथ्र्याइएको छ तर मुक्तिपछिको क्षणलाई केवल भूमिगत प्रेमसमर्पणको तहमा लगेर टुङ्ग्याइएको छ । यसकारण दर्शनका दृष्टिले विचलन देखा परे पनि सम्पूर्णतः प्रेमसमर्पणका दृष्टिले कथाशृङ्खला शृङ्खलित छ ।
कथाशृङ्खला प्रस्तुतिका दृष्टिले सङ्ग्रहलाई हेर्ने हो भने समानता फेला पर्छ । यसमा एकजना कथावाचक छन् जो प्रत्येक कथाको सुरूमा देखा पर्छन् र अर्का एकजना स्रोता छन् जो कथा श्रवण गरिरहेका (?) छन् । कथावाचक प्रायः एकलव्यसमान छन् । उनी एकालापीय शैलीमा कथा भनिरहन्छन् । उनलाई यो मतलब छैन कि उनका लक्ष्यित स्रोताले कथा सुनिरहेका छन् अथवा छैनन् । यसरी कृष्णको प्रेममा एकोहोरो परेकी राधाको जस्तो स्थिति छ कथावाचिकाको । उनी दिवाकर नेपाली भन्ने पात्रलाई कहिले आफ्नो त कहिले आफूवरिपरि ठोक्किन आएका पात्रहरुको कथा भन्दै जान्छे । कथावाचकको भूमिकामा देखा परेकी अनामिका अन्ततः आफै दिवाकर नेपालीको प्रेममा समर्पित हुन्छे बत्तीमा पुतली होमिएजसरी । आफ्नो ज्वालामा परी डढेर भस्म भएकी पुतलीका बारेमा कम्तीमा बत्तीलाई त थाहा हुन्छ होला तर यहाँ दिवाकर नेपालीका लागि समर्पित बनेकी अनामिकाको समर्पणका बारेमा स्वयम् दिवाकर नेपालीलाई थाहा छैन । यसैले यस स्तरसम्मको प्रेमको तन्तुबाट कथाशृङ्खला जोडिएका छन् । सम्बोधित (दिवाकर नेपाली) र सम्बोधक (अनामिका) का बीचको प्रेमसम्बन्धले अधिकतम उचाइ छोएको प्रमाण हो कथाशृङ्खलाभित्रका कथाहरु ।
अघि नै भनियो ‘कथाहरु’ भनिए पनि विधाविचलनको अवस्था देखा पर्छ भनेर । यस किसिमको नवीनतम प्रयोगलाई सिद्ध गर्न ठाउँठाउँ काव्यात्मक अभिव्यक्तिले समेत ससम्मान स्थान पाएको छ । यी काव्यांशहरुले पनि प्रेमलाई नै उचाइमा पु¥याउन टेवा प्रदान गरेका छन् । यस अतिरिक्त ठाउँठाउँ निबन्धजस्ता लाग्ने सघन भावविचारहरु उर्लिएर आएका देखिन्छन् भने कतैकतै पात्रहरुका बीचका संवादात्मक शृङ्खलाले नाटकीयताको अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन् । यसरी फरकफरक विधाका स्वादका लागि शृङ्खला उपयुक्त साधन हुन सक्छ ।
यद्यपि विधाभञ्जन र विधामिश्रणको प्रयोग नौलो होइन तापनि एकमा तीनको उत्तरआधुनिक रुप यस शृङ्खलामा देख्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त समसामयिकता र नवीन सोच एवम् प्रविधिको प्रयोगले कथाशृङ्खलाहरुलाई वर्तमान जगत्सँग साक्षात्कार गराउँछन् । यसले गर्दा कथाशृङ्खला वर्तमान पुस्ताका लागि ग्रहणीय बनेको छ । यी आदि तथ्य र सत्यका साथै एकोहोरो वर्णनले उत्पन्न गर्न सक्ने पाठकीय प्रभावक्षति बेहोर्न कथाशृङ्खलाकार (?) तयार हुनै पर्छ । प्रायशः शृङ्खलामा देखा पर्ने घटनावर्णन र तिनमा देखा पर्ने नाटकीय परिवर्तनहरुले पाठकलाई झस्काउन सक्छन् । लामालामा संवादले सास फेर्ने फुर्सद नपाएर कतैकतै निसासिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि जीवनका ‘क्यानभासमा कोरिएका कथाहरु’लाई लिएर दोस्रोपटक नेपाली कथासंसारमा देखा परेकी कथाशृङ्खलाकार (?) को उपस्थितिलाई स्वागत गर्नै पर्छ ।
(विसं २०६८ मा स्वर्णिम नव साहित्य प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पुस्तकको आवरण केके कर्माचार्यले गरेका हुन्- सं)